Tadiavo ny tavoahangin-tsakafo malalaka miaraka amin'ny BioPerine! - Fialam-boly
Home » Freebies » Tadiavo ny tavoahangin-tsakafo malalaka miaraka amin'ny BioPerine!
Tadiavo ny tavoahangin-tsakafo malalaka miaraka amin'ny BioPerine!
Ho an'ny fotoana voafetra ihany, ny sakaizantsika amin'ny Science Natural Supplements dia mamoaka tavoahangy Kambodziana FREE! Ny rehetra tsy maintsy aloanao dia sanda kely ho an'ny fandefasana sy ny fikarakarana. izany FREE TOURMERIC tolotra dia manan-kery mandritra ny famatsiana farany.
Ity dia teboka feno 60 iray manontolo fa tsy hoe modely maimaim-poana fotsiny ianao. Ankoatra ny 650mg amin'ny Extension Turmeric isaky ny manompo, ny Turmeric miaraka amin'ny BioPerine dia ahitana koa:
Manganese (44%) - Ny Manganese dia manampy amin'ny tavy, taolana, ary ny rà. Izy io koa dia manampy ny fatran'ny metabolismana rehefa mifampiraharahana miaraka amin'ireo zavatra hafa ao anatin'io fitambaran-javatra io
Iron (14%) - Ny vy dia manampy anao hihinana proteinina
Vitamin B6 (5%) - Vitamin B6 dia manampy amin'ny fanatsarana ny hoditrao, ny maso, ny volonao ary ny atiny
Fiber (10%) - Ny fibre dia manampy ny sakafo hihetsika haingana amin'ny alalan'ny taratasy mivalona mahasalama ary manampy amin'ny ambaratonga ao amin'ny tsinay
Copper (9%) - Ny Copper dia manampy ny vatana amin'ny collagen ary mametraka vy, ary mitana anjara toerana lehibe amin'ny famokarana angovo
Potassium (3%) - Potassium manohana ny halavan'ny tosi-drà. Zava-dehibe koa ny mitazona ny balan'ny asidra sy ny fototra ao amin'ny vatanao
Vitamin K (8%) - Vitamin K dia tena ilaina amin'ny fikarakarana ny ratra
Calcium (3%) - Ny kalcioma dia manampy amin'ny fitazonana ny taolana sy ny fahasalaman'ny sigara ary manampy amin'ny fisorohana ny homamiadan'ny homamiadana sy ny fihenan'ny alikaola
Chromium (4%) - Manampy amin'ny fanaraha-maso ny siramamy ao amin'ny rà ny kromium, ary manampy amin'ny fitaterana entona amin'ny gliokaozy ny insuline, izay azo ampiasaina amin'ny angovo
Kitiho eto mba hahazoana ny FREE TOURMERIC miaraka amin'ny supplement BioPerine!
Mahaliana kokoa noho ny tavoahangy Xmerom avy amin'ny Turmeric? Manana adihevitra mahagaga ihany koa izy ireo izay afaka mividy tavoahangy 1 amin'ny vidin'ny $ 1 antsinjarany ary afaka mahazo tavoahangy XMUMX bebe kokoa ho an'ny FREE GRATIS. Kitiho eto ho an'ny Buy 1 Get 3 Free fifanarahana
March 9, 2018 Admin Freebies, fanampin-tsakafo Tsy asian-teny
FREE Wristband Awareness Diabetes
Buy 1 Mividy tavoahangy 3 ho an'ny besinimaro!